တန်ဖိုးမသိတဲ့သူတွေကြောင့် နည်းနည်းတော့စိတ်ထိခိုက်ရတယ် – Hlataw.com
ဒေါ်မြတ်တင်မေကို ထွန်းကိုသိတာတော့ကြာပြီ။ ဒါပေမဲ့ ရင်းနှီးတာတော့အရမ်းကြီးမရင်းနှီး။ ထွန်းကိုကား အသက် (၂၇)နှစ်ခန့်ရှိသည့် လူလတ်ပိုင်းတစ်ဦး။ ယောင်္ကျားဆန်ဆန်နှင့် ချောမောသော ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်တစ်ဦး.။ စကားပြောလည်းကောင်းသော ကြောင့် ချစ်သူခင်သူများသည်။ ဘွဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မြို့မှာလာပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ။ ဒေါ်မြတ်တင်မေကား သူငှားနေသည့် အဆောင်မှ အဆောင်ပိုင်ရှင် ဦးကောင်းမင်း၊ ဒေါ် နီလာ နှင့်သူငယ်ချင်းတွေ။ ဒေါ်နီလာထံလာရင်း မျက်မှန်းတန်းမိကာ ရင်းနှီးနေသောသဘော။ ဒီလောက်ဘဲရှိသည်။ ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ ထွန်းကိုသိသည်။ ဒေါ်မြတ်တင်မေကတော်တော်လှသည်ဟု။ ဟုတ်တယ်လေ….အသက်က(၄၀)စွန်းစွန်း။ ငယ်စဉ်ကမယ်ဘွဲ့တွေဘာတွေရဖူးသည်ဟုတော့သိရသည်။ သူမနှင့်သူမယောင်္ကျား ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ကလေး(၂)ယောက်ထွန်းကားခဲ့သည်။ ထိုကလေးတွေကလည်း သူမြင်တော့မြင်ဖူးသည်။
ဒါကလဲကျောင်းပိတ်ချိန်တွေလောက်မှပါ။ ဘော်ဒါဆောင်မှာထားတာဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှသာ။ ဒေါ်မြတ်တင်မေယောင်္ကျားကလည်း အလုပ်များသူပီပီအိမ်မှာမကပ်။ ဒီတော့ သူမကလည်း ထွန်းကိုငှားနေသော အဆောင်ပိုင်ရှင်ဒေါ်နီလာဆီ မကြာမကြာလာလည်သည်။။ သူမတို့ဘာတွေပြောလို့ပြောနေကြမှန်းတော့မသိ။ ထွန်းကိုအလုပ်ပြန်လာသည့် အခါ မကြာခဏတွေ့သည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် ဒေါ်မြတ်တင်မေက သူ့ကိုမကြာခဏပြုံးပြတတ်သည်။ ပြုံးသည့်အခါတွင်တော့ တော်တော်ချစ်စရာကောင်းသည်။ ပါးပြင်တွင်ပါးချိုင့်လေးတစ်ခုရှိသည်။ ငယ်စဉ်ကဆိုလျင်တော့ ဒီထက်ပိုလှလိမ့်မည်ဟု ထွန်းကိုထင်သည်။ ပြီးတော့ အဆောင်ပိုင်ရှင် မိန်းမဒေါ်နီလာနှင့် သူမသူငယ်ချင်းဒေါ်မြတ်တင်မေတို့သည်.. ခေတ်လည်းဆန်သည်။ ခေတ်နှင့်အညီလည်းပြင်ဆင်တတ်ကြသဖြင့်။ တစ်ခါတစ်ရံမသိသူများက သူမတို့နှစ်ယောက်ကို အပြင်ထွက်သွားလျှင် အပျိုကြီးတွေလိုထင်ကြသေးသည်။
ထွန်းကိုတို့လိုအကြောင်းသိသူတွေပါ။ ဒါတွေကထွန်းကိုကဏ္ဍမဟုတ်ပါ။ ထွန်းကိုသိသည်က တစ်နေ့တစ်နေ့အလုပ်သွားဖို့။ ပြန်လာလျင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်ချင်ထွက်မည်။ အခန်းထဲအောင်းကာစာအုပ်ဖတ်ချင်ဖတ်မည်။ ဖုန်းဖြင့် အပြာကားကြည့်ချင်ကြည့်နေမည်။ လကုန်လျင် လခထဲမှပိုသော ပိုက်ဆံကို အိမ်သို့ပို့မည်။ ဒီလောက်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံပုံမှန်လည်ပတ်နေသော စက်တစ်လုံးသည် တစ်ခုခုချို့ယွင်းသွားသည်နှင့် ဗွေဖောက်လာတတ်သောသဘောရှိသည်။ ထွန်းကိုမသိသည်က သူ့အဆောင်ပိုင်ရှင် ဇနီး ဒေါ်နီလာနှင့် ဒေါ်မြတ်တင်မေတို့ကား သူထင်ထားသလို အေးဆေးတည်ငြိမ်သောမိန်းမများမဟုတ်ကြ။ လစ်လျှင်လစ်သလို ကမြင်းတတ်ကြသော ကုတ်ကမြင်းများသာဖြစ်ကြသည်ကိုပင်။ မောင်လေး…ပြန်လာပြီလား….ဒီနေ့နည်းနည်းနောက်ကျတယ်နော်။ အိမ်ရှေ့တွင် လမ်းလျှောက်နေသော ဒေါ်နီလာက ထွန်းကိုကိုနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
ဒေါ်နီလာဘေးတွင် အတူတူလျှောက်နေသော ဒေါ်မြတ်တင်မေက ထွန်းကိုကိုပြုံးပြသဖြင့် ထွန်းကိုလည်းပြန်ပြုံးပြလိုက်သည်။ ဟုတ်ကဲ့..အမ..ဒီနေ့ အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်နေတာနဲ့ နောက်ကျသွားတာ…။ ထွန်းကိုငှားနေသော အိမ်လေးက ဒေါ်နီလာတို့ အိမ်ကြီးဘေးကတိုက်ပုလေးမှာ။ ဒေါ်နီလာတို့ နှစ်ထပ်အိမ်သစ်ကြီးဆောက်ခဲ့ရာတွင် ဘေးတွင် သူမတို့ယခင်ကနေခဲ့သော တိုက်ပုလေးက ပိုနေသဖြင့် အလကားဖြစ်နေမည့်အတူတူလူငှားတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငှားစကတော့ ထွန်းကိုနှင့် သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်။ သူ့သူငယ်ချင်းက ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားသဖြင့် ထွန်းကိုတစ်ယောက်သာကျန်ခဲ့သည်။ အိမ်ကြီးမှာတော့ ဒေါ်နီလာတို့လင်မယားနှင့် အိမ်ဖော်အဒေါ်ကြီးတို့သားအမိရှိသည်။ သူမယောင်္ကျားဦးကောင်းမြတ်ကလည်း ကုန်သည်တစ်ဦးပီပီမကြာမကြာခရီးထွက်တတ်သည်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဦးကောင်းမြတ်ကိုမမြင်မိ။ ခရီးထွက်သွားပြန်ပြီထင်တယ်ဟု သူတွေးမိသဖြင့်…။
အမ…အခုတလော ဦးကိုမမြင်ပါလား..ဘယ်သွားပြန်ပြီလဲ..။ သြော်…မင်းဦးလေးက နယ်ဘက်ခဏဆင်းသွားတယ်…။ ကုန်ဖိုးတွေကောက်ရင်း နှစ်ပတ်လောက်တော့ကြာမယ်ပြောတယ်…။ ငါ့မောင်အိမ်ငှားနေလို့တော်သေးတယ်…နို့မို့ဆိုအမတို့ကမိန်းမသားတွေချည်းနေရတာ..။ သူခိုးတွေကလည်းသောင်းကျန်းလိုက်တာကွယ်..။ ဟုတ်..ဟုတ်..အမကျွန်တော်က ညဖက်ဆိုအပြင်သိပ်မထွက်တော့ အမြဲလိုလိုရှိပါတယ်။ တစ်ခုခုကြားရင် လှမ်းခေါ်လိုက်နော်.။ အေးအေး…ငါ့မောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်..။ ဒေါ်နီလာကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ထွန်းကိုသူငှားနေသောတိုက်ပုလေးအတွင်းသို့ဝင်ခဲ့သည်။ တစ်ယောက်ထဲနေတော့ ထမင်းဟင်းကချက်ရဦးမည်…။ ရေအရင်ချိုးပြီး ရေမချိုးခင် ထမင်းအိုးတစ်လုံးတည်ထားဦးမှ.။ အိမ်ကိုသော့ဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်ကာ….သူရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီး ခဏအိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲကာအညောင်းအညာဖြေနေလိုက်သည်။ ဒေါက်ဒေါက်…တံခါးခေါက်သံကြောင့် သူတံခါးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့..။
ဒေါ်နီလာအိမ်မှ အိမ်ဖော်ကောင်မလေး မခိုင်ဖြစ်နေသည်။ ဦး..ဒီနေ့ည အန်တီက သူ့အိမ်မှာ ထမင်းလာစားပါတဲ့..အကို့ကိုပြောခိုင်းလို့..။ ဒီနေ့ ထမင်းမချက်နဲ့တော့တဲ့…။ ဒေါ်နီလာတို့မိသားစုက တစ်ခါတစ်လေ သူ့ကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးတတ်သည်။ သြော်…အေးအေး.. ကောင်းလိုက်တာ။ ဒီနေ့အဖို့တော့ ထမင်းချက်ရမဲ့ ၀ဋ်ကျွေးလွတ်သွားပြန်ပြီလို့ တွေးရင်း ထွန်းကို ပုဆိုးဟောင်းတစ်ထည်ကိုယူကာ ရေချိုးခန်းထဲသို့ဝင်သွားတော့သည်။ တစ်နေကုန်ပင်ပန်းခဲ့သမျှကို ပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားအောင် ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်လေ။ နီလာ….အဲ့ကောင်လေးနာမည်က ထွန်းကိုနော်။ ဟုတ်တယ်…မြတ်တင်မေရဲ့..ကောင်လေးကအေးအေးဆေးဆေးလေး။ နေ့တိုင်း အလုပ်ပြန် အိမ်ထဲတန်းဝင် ဘာတွေလုပ်လို့လုပ်မှန်းတော့ မသိဘူး။ အေးပါဟဲ့..နင်ကလည်းအဲ့လောက်အမွမ်းတင်မနေပါနဲ့…ခစ်ခစ်…။ ဟင်..စကားကောင်းပြောနေတာကို..ဖောက်ဖောက်လာတယ်..မိန်းမ..။ ဒေါ်မြတ်တင်မေအပြောကို ဒေါ်နီလာက ပုခုံးကို ပုတ်ရင်း ချက်ချင်းပြန်ပြောလိုက်သည်။
ခိခိ…မသိတာကြနေတာဘဲနီလာရယ်…။ အခုက နင့်ဘဲကြီးကလဲ ခရီးတွက်။ ဒီအိမ်မှာကလဲ… ဒီလို ယောင်္ကျားပီပီသသကောင်လေးကလည်းရှိ….နင်အပျင်းပြေတာပေါ့..။ ဒေါ်နီလာရှက်သွားသည်.. ဒေါ်မြတ်တင်မေရဲ့ တင်ပါးကိုဆွဲဆိတ်လိုက်ပြီး…။ ညဉ်းနော်..ညဉ်း..တင်မေ…မိန်းမနင့်စိတ်နဲ့နိုင်းမနေနဲ့…နင့်လိုယွတယ်များမှတ်နေလား။ ဘယ်အချိန်ကတဲက အဲ့ကောင်လေးကို နစ်ပစ်မှားနေမှန်း မသိရပါလား..မိတင်မေ။ သူမတို့ကား ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပီပီဝါသနာတူစရိုက်တူတွေ။ သူတော်ချင်းချင်း သတင်းလွေ့လွေ့ပေါင်းဖက်မိကြတာဆန်းတော့မဆန်း။ အောင်မယ်…ညဉ်းကျတော့ ခိုးစားဖို့ကြံနေတာမသိတာကျ။ ခစ်..ခစ်..နင်သိရင်ပြီးတာဘဲလေ…။ ကောင်လေးကတော့ရိုးရိုးအအပုံစံလေးနော်..နီလာ…။ နင်တစ်ယောက်ထဲတော့ ကြိတ်ကြံမနေနဲ့….ငါ့ကိုမျှပေးရမယ်။ နင်တစ်ယောက်ထဲစားလို့ကတော့ အားလုံးဖော်ပစ်လိုက်မယ်…ဟင်းဟင်း။ ဘာလဲ..အ၀တ်တွေကိုချွတ်ပြီးတော့လား…ခိခိ..။
ကဲ..ဟယ်…မိန်းမ..ကြည့်စမ်းကြည့်စမ်း…ယွချက်ကလွန်တယ်။ ဒေါ်မြတ်တင်မေကို ဒေါ်နီလာကပြန်နောက်လိုက်သဖြင့် ဒေါ်မြတ်တင်မေကဒေါ်နီလာကျောကို တအုန်းအုန်းထုတော့သည်။ ရှုး…တိုးတိုး…ကြားသွားဦးမယ်…။ နှုတ်ခမ်းနားတွင် လက်ညိုးထောင်ရင်း ဒေါ်နီလာကပြောလိုက်သည်။ အိမ်ဖော်ကောင်မလေးက သူမတို့ထိုင်နေသည့်နေရာဘက်သို့လာနေသည်။ အမ.ဟိုဖက်အိမ်က ဦးကိုပြောပြီးပါပြီ…ထမင်းလာစားဖို့။ သြော်..အေး…အေး.. ဒေါ်နီလာကမျက်နှာထားကို ခပ်တင်းတင်းပြင်ရင်းပြောလိုက်သည်။ အိမ်ဖော်အဒေါ်ကြီးကလဲ အခန်းထဲဝင်လာသည်…။ မမလေး…။ ပြောပါ..ဒေါ်လေး..ဘာကိစ္စရှိလို့..။ ဟိုလေ…ရွာမှာလေ…ဒေါ်လေးညီမနေမကောင်းလို့တဲ့..လာပြောလို့။ အဲ့ဒါ လေးငါးရက်လောက်ပြန်ချင်တယ်။ သြော်..ဟုတ်လား..ဒေါ်လေး..ကျန်းမာရေးဘဲ…ပြန်ရမှာပေါ့။ ပိုက်ဆံရောလိုမှာဘဲ…ဒေါ်နီလာကား ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွင့်ပြီး ပိုက်ဆံတစ်ထပ်ကိုဆွဲထုတ်ကာ အဒေါ်ကြီးကို ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဒေါ်ကြီးကတော့ ကျေးဇူးတွေကိုတင်လို့။ ဒီတစ်ခါသူ့အိမ်ကြီးရှင်မက သဘောကောင်းနေလိုက်တာပေါ့လေ။ ထမင်းစားဖိတ်ထားသည့်အချိန်က နည်းနည်းစောသေးသဖြင့်. ထွန်းကို အိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲနေရင်း နေ့လည်က အလုပ်ထဲမှ မိတ်ဆွေဖုန်းထဲကနေ သူ့ဖုန်းထဲကို ကူးလာသော အပြာကားတစ်ကားကိုကြည့်နေသည်။ အမေရိကန်ကားဆိုတော့ အားရစရာကောင်းသည်။ ဇာတ်ကားကတော်တော်ကောင်းသည်…။ အပေါက်စုံလိုးရုံမကဘူး…စုပ်တာမှုတ်တာကလည်း ဘတစ်ပြန်ကျားတစ်ပြန်ပင်..။ ကြည့်ရင်းနှင့်ဖီးလ်တက်လာသဖြင့် ပုဆိုးအောက်ကိုလက်နှိုက်ပြီး သူ့လီးကြီးကိုဆုပ်ကိုင်ကာဆွနေမိသည်။ သူ့လီးကလည်းဇာတ်ကားထဲက နီဂရိုးလီးထက်မကြီးလျင်သာနေမည်။ လျော့တာတော့မလျော့..၆လက်မခန့်ရှိပြီး ဓါတ်ခဲလုံးအကြီးခန့်ရှိသည်အတုတ်က။ တစ်ခုတော့ကွာသည်..ဇာတ်ကားထဲကလက်တွေ့လိုးနေတာ။ သူကတော့ မိန်းမပင်မလိုးဖူးသေး။ ဖုန်းကိုဘေးချရင်း ဂွမ်းတိုက်လိုက်သည်။
အာရုံထဲမှာ သူမြင်နေကျမိန်းမတွေကိုမြင်လာသည်။ သို့သော်တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်မှန်းကြည့်သည်..။ ဖီးလ်ကမလာ။ စိတ်ကူးထဲမှာ ခုနက အိမ်ထဲအ၀င်မှာမြင်ခဲ့ရသောဒေါ်နီလာနှင့် ဒေါ်မြတ်တင်မေကို မြင်လာသည်။ ဒေါ်နီလာနှင့်ဒေါ်မြတ်တင်မေကလည်း အအိုတွေသာဆိုတယ်။ အသားဖြူဖြူအရပ်မြင့်မြင့် အိုးကြီးတွေက တောင့်တောင့်ကြီးတွေ။ ကြည့်ရင်းနဲ့..မှန်းလို့ကောင်းလာသည်..သူ့ထုချက်တွေကပိုမိုမြန်ဆန်သွက်လက်လာသည်။ ဆော်ကြီးကလည်း ယောင်္ကျားမရှိတော့ ဆာချင်ဆာနေမှာလို့ သူတွေးမိလာသည်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ကျတော့သူမစရဲ။ အင်း…ဟင်း….သူ့စိတ်ထဲမှာ ဒေါ်နီလာအဖုတ်ကိုတစ်လှည့် ဒေါ်မြတ်တင်မေအဖုတ်ကိုတစ်လှည့် လိုးပေးနေရသလို ခံစားလိုက်သည်။ အ..အာ..မမမြတ်…မမနီလာ…အအ.. ထွန်းကိုတစ်ယောက်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ လရေတွေပန်းထွက်ကုန်ပြီ…။ ဒေါက်ဒေါက်..တံခါးခေါက်သံကြားသဖြင့် ထွန်းကိုတစ်ကိုယ်လုံးတုန်သွားသည်..။
ဦး…မမက ထမင်းစားရအောင်တဲ့…။ သြော်..အေးအေး…လာခဲ့မယ်။ ဒေါ်နီလာအိမ်မှ အိမ်ဖော်မလေး ထမင်းစားရအောင်လို့လာခေါ်တာထင်သည်။ သူလဲ ရေချိုးခန်းအတွင်းဝင်ပြီးလက်ကို ကပျာကယာဆေး…။ ပေပွသွားသော ပုဆိုးကို နောက်တစ်ထည်ဖြင်လဲပြီး အိပ်ယာပေါ်မှချထားသော်ဖုန်းကိုကောက်ယူကာ အ၀တ်အစားကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်လိုက်ပြီး အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ကာ ဒေါ်နီလာတို့ တိုက်ဖက်ကိုထွက်ခဲ့တော့သည်။ ငါ့မောင်..လာ.လာ..ဒေါ်နီလာက ပျုပျုငှာငှာဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။ ထွန်းကိုထမင်းစားပွဲကို ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်မြတ်တင်မေပါရောက်နေတာကိုတွေ့ရသည်။ ဒီလို ငါ့မောင်ရေ မချိုကလည်း သူ့အိမ်မှာတစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ မမတို့အိမ်မှာ ထမင်းစားရအောင်ဖိတ်ထားတယ်…သူ့ချစ်ချစ်ကြီးကလည်းခရီးထွက်သွားတယ်လေ။ သြော်…ထွန်းကို စားပွဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ထမင်းစားတယ်ဆိုတာထက် ထမင်းထက်ဟင်းကများနေသည်။ သြော်…အမနီလာ..ဒေါ်ကြီးရော မမြင်ပါလား…။
ညနေကဘဲ ရွာကသူ့ညီမနေမကောင်းလို့ဆိုလို့ ပြန်ခိုင်းလိုက်ရတယ်.။ ကောင်မလေးဘဲရှိတယ်… ထိုအချိန်မှာပင် ကောင်မလေးက စားပွဲပေါ်သို့ဟင်းခွက်တွေချလာသည်…။ အန်တီနီလာ..သမီးသယ်လာခဲ့ရတော့မလား..အန်တီပြောထားတဲ့ဟာ…။ အေးလေ..သယ်လာခဲ့လိုက်တော့…။ ထွန်းကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားသည်…။ ဘာအစီအစဉ်တွေရှိသေးပါလိမ့်။ ဘာများလဲ..အမလို့မေးလိုက်သည်…သူ့အမေးကိုဒေါ်နီလာမဖြေပါ.။ ဒေါ်မြတ်တင်မေကကြားထဲက၀င်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုငါ့မောင်ရဲ့ အမအိမ်မှာ ၀ိုင်ပုလင်း(၂)ပုလင်းလေ အမမိတ်ဆွေပေးထားတာ။ မသောက်ဖြစ်တာနဲ့ နီလာနဲ့အတူသောက်ရအောင်ဆိုပြီးသယ်လာတာ။ ဟင်…ထွန်းကိုအံ့သြသွားသည်…။ အမတို့ကသောက်တတ်လို့လား…မူးနေဦးမယ်။ သူ့အပြောကြောင့် ဒေါ်နီလာနှင့်ဒေါ်မြတ်တင်မေက တပြိုင်တည်း တခစ်ခစ်ရယ်ကုန်သည်။ ကျွတ်စ်..ကျွတ်စ်…ငါ့မောင်က အမတို့ကိုတယ်အထင်သေးတာဘဲ…။
ထွန်းကိုလည်းဘာမှဆက်မပြောတော့။ ထိုအချိန်မှာပင်အိမ်ဖော်ကောင်မလေးက ဗန်းဖြင့် စားပွဲပေါ်သို့ ၀ိုင်ပုလင်းများကိုတင်လာသည်။ ၀ိုင်က ပုလင်းအကြီးကြီးတွေ..အကောင်းစားဝိုင်တွေဖြစ်မည်။ ထို့အပြင် ၀ီစကီ တစ်လုံးပါလာတာကိုတွေ့ရသည်။ ဒါက…ထွန်းကိုအမေးကို ဒေါ်နီလာက မစောင့်တော့ဘဲ။ နင့်ဦးလေးသိမ်းထားတဲ့ဟာလေ…ငါ့မောင်ဘဲသောက်လိုက်တော့။ ငါ့မောင်ကို အမက ကိုယ့်မောင်လိုခင်လို့တိုက်တာနော်သိလား။ မိခိုင်ရေ တံခါးတွေပိတ်လိုက်တော့…။ ပြီးတော့ အိမ်အပေါ်ထပ်က အန်တီအခန်းထဲမှာ နင့်အန်တီ တင်မေအိပ်လို့ရအောင်ပြင်ပေးလိုက်ဦး။ ဒီည တင်မေက ဒီမှာအိပ်မှာ။ ဟုတ်…အန်တီ…သမီးဘာလုပ်စရာရှိသေးလဲရှင့်။ ရပြီ…အန်တီတို့သောက်တာစားတာကိုစောင့်မနေနဲ့ မနက်ကျမှသိမ်းလိုက်တော့။ ပြီးရင် အန်တီအခန်းထဲက အံဆွဲထဲမှာ သမီးအတွက်မုန့်ဖိုးထည့်ထားတယ်.။ ယူလိုက်နော်။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့်…အန်တီ။ ကောင်မလေးမိခိုင်ကား ဒီနေ့စောစောစီးစီးနားရသည့်အပြင် မုန့်ဖိုးလည်းရမည်ဆိုတော့ ပျော်ရွင်စွာဖြင့် သွက်လက်စွာ အိမ်အပေါ်ထပ်သို့တက်သွားတော့သည်။
ချီးယား..စ်…ဖန်ခွက်ချင်းတိုက်လိုက်ကြပြီး ထွန်းကိုကား လက်ထဲမှခွက်ကိုတရှိန်ထိုးမော့လိုက်သည်။ ၀ီစကီက တစ်ပိုင်းကျိုးနေပြီဖြစ်သောကြောင့် သူလည်းတော်တော်မူးနေပြီ။ ဒေါ်မြတ်တင်မေနှင့် ဒေါ်နီလာတို့၏ သဏ္ဍာန်များကလည်းတော်တော်ရီဝေနေကြပြီ။ ထွန်းကိုကား မူးလာသဖြင့်စကားပြောများကလည်းတော်တော်ရဲတင်းနေပြီ။ ဒေါ်နီလာက ရီဝေနေသော မျက်လုံးများဖြင့် ထွန်းကိုကိုကြည့်လိုက်ပြီး။ နေဦး..ငါ့မောင်ကိုမေးစရာရှိလို့..။ ဘာမေးမှာလဲ…မမနီလာ..မေးချင်တာမေး။ အပြောများကသွက်လက်လာပြီ။ ထွန်းကိုမျက်လုံးများက ဒေါ်နီလာနှင့် ဒေါ်မြတ်တင်မေတို့ ရင်ဘတ်တွေကိုကြည့်နေသည်။ မူးနေသော်လည်း ဒါမျိုးကျတော့သူကမြင်တတ်သည်။ အပန်းရောင် ဘလောက်စ်အကျီကိုဝတ်ဆင်ထားသောဒေါ်မြတ်တင်မေနှင့် နက်ပြာရောင်ဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ထားသော ဒေါ်နီလာတို့ အကျီများက ထူးထူးခြားခြားဟိုက်နေပြီး သူမတို့ ဟနေသော ရင်ဘတ်ကြားမှ ဖွံ့ထွားနေသော နို့ကြီးများကို။
မသိမသာမြင်နေရသဖြင့် ကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကိုမြင်ရတော့သူ့စိတ်တွေကြွလာသည်။ ဒီလို..ငါ့မောင်ရဲ့…ငါ့မောင်မှာရည်းစားရှိလား…ခစ်ခစ်။ မရှိဘူး..အမ.။ ဒေါ်မြတ်တင်မေကလည်း အာလေးလျှာလေးဖြင့် ၀င်ထောက်လိုက်သေးသည်။ မယုံပါဘူး…ငါ့မောင်က ဒီလောက်ရုပ်ချောတာ…ရည်းစားမရှိဘူးဆိုတာအမကယုံကိုမယုံဘူး။ ဟာ..တကယ်ပြောတာမမမြတ်ိရဲ့….သူကလည်းချက်ချင်းကိုပြန်ငြင်းတာ။ ခိခိ…ဒါဆိုအထီးကျန်မှာပေါ့ငါ့မောင်ရဲ့… အေးလေ…အတွေ့အကြုံမရှိဘာမရှိနဲ့..မိန်းမလည်တွေနဲ့တွေ့မှာစိုးရိမ်စရာ။ အပူမရှာချင်ပါဘူး…မမတို့ရယ်… အေးပါ…ပြောတော့လဲယုံရသေးတာပေါ့…ဒေါ်မြတ်တင်မေက ၀ိုင်ခွက်ကို မော့သောက်လိုက်ရင်းပြောလိုက်သည်။ အဟုတ်..တကယ်ပြောတာမမရဲ့…သင်ပေးမဲ့သူမှမရှိတာ။ သင်ပေးမဲ့ သူလေးတွေရှိရင်တော့အကောင်းသား…။ ထွန်းကိုကလည်း မူးနေတော့ ရဲတင်းနေပြီး မထိခလုပ်ထိခလုပ်တွေပြောကုန်ပြီ။
ဒေါ်နီလာနှင့်ဒေါ်မြတ်တင်မေကား တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ကြည့်ကာ ထွန်းကိုမသိအောင် မျက်စပစ်လိုက်သည်။ ကဲ.ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်..။ အခုလို ကျွေးမွေးတာကျေးဇူးပါဘဲဗျာ…သက်နိုင်က ထိုင်ရာမှထလိုက်သည်။ မူးနေသောကြောင့် ခြေထောက်များက ယိုင်သွားပြီး လဲမလိုဖြစ်သွားသည်။ အို..ငါ့မောင်မူးနေပြီဘဲ…ခစ်ခစ်… ဒေါ်နီလာနှင့် ဒေါ်မြတ်တင်မေက သူ့ကိုတစ်ဖက်စီမှဖမ်းထိန်းလိုက်သည်။။ ထွန်းကိုကား မူးနေတာဘဲ သိသည်။။အိမ်ပြန်ဖို့ဆိုသည့်စိတ်ကူးကိုသူမေ့သွားပြီ။ ဒေါ်နီလာနှင့်ဒေါ်မြတ်တင်မေကား ထွန်းကို၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ချိုင်းအောက်မှ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမပြီး အပေါ်ထပ်မှ ဒေါ်နီလာရဲ့အိပ်ခန်းပေါ်သို့တွဲတင်သွားသည်။ ခပ်တောင့်တောင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး၏ အထိအတွေ့များနှင့် ကိုယ်သင်းရနံ့များကြောင့် ထွန်းကိုတစ်ယောက် ရမ္မက်စိတ်များပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ စိတ်တွေကိုလွတ်ပေးလိုက်သည်..ဒေါ်မြတ်တင်မေနဲ့ ဒေါ်နီလာတို့၏ ဂုတ်များကို တစ်ဖက်စီ ဖက်ပြီး လိုက်ရတာကို သူသာယာနေသည်။
ကဲ..ငါ့မောင်..အိပ်တော့..ဒေါ်နီလာနှင့်ဒေါ်မြတ်တင်မေက အိပ်ယာပေါ်ပွေ့တင်ပြီး… ဒေါ်နီလာရဲ့အိစက်သော ရင်ညွှန့်ကြီးက သူ့မျက်နှာပေါ်ဖိပြီး ပိပြားနေတာကိုတော့သိသည်။ အမတို့ ဘာလုပ်မလို့လဲ….။ ခစ်ခစ်…ငါ့မောင်ကိုမမတို့က အချစ်သင်ခန်းစာတွေ ပို့ချမလို့။ မသင်ချင်ဘူးလား…ဒေါ်မြတ်တင်မေက၀င်ပြောလိုက်သဖြင့် ထွန်းကိုစိတ်တွေပိုလွတ်သွားပြီ။ ဖြစ်လိုရာဖြစ်စေတော့… ဟင်း..ဟင်း…မမတို့သာ သင်ပေးလို့ကတော့ ဒီကချစ်မောင်လေးကလည်းကြိုက်ကြိုက်ဘဲ။ မင်း..မကြောက်ဘူးလား…ဒေါ်နီလာကပြုံးစိစိမေးလိုက်သည်။ ဟက်..ဟက်…ကြောက်စရာလား…ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မမကြီးတွေကို…။ ကျွန်တော်က အားရပါးရချစ်ချင်နေတာ..စိတ်ကူးနဲ့ရူးနေတာကြာပေါ့။ မူးမူးနဲ့ ထွန်းကိုလည်း စိတ်ထဲရှိတာတွေလျှောက်ပြောကုန်ပြီ။ ဒါဆိုမျက်လုံးခဏမှိတ်ထား…ထွန်းကိုကားမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်သည်။ ဒေါ်နီလာက သူ့အကျီကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်ပေးနေတာကိုသိသည်။
လက်ဖြင့် သူ့ရင်ဘတ်ကို ခပ်ဖွဖွပွတ်သပ်ကျီစယ်နေတာလည်းသိရသည်။ သူ့ခါးအောက်ပိုင်းမှ ပုဆိုးကလည်းပြေလျာ့သွားပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ခံလိုက်ရမှုနှင့်အတူ ဒုတ်ကြီးအပြင်ထွက်သွားတာကိုသိသည်။ ဒေါ်မြတ်တင်မေကား ထွန်းကိုရဲ့လီးကြီးကိုကြည့်ကာတံတွေးနင်သွားသည်။ နည်းတဲ့ လီးကြီးမဟုတ်။ အကြောတပြိုင်းပြိုင်းနှင့်နဂါးတစ်ကောင်လိုမာန်ဖီနေတာ။ သူမယောင်္ကျားကိုမောင်မောင်ဝင်းထက်ပိုလည်းကြီးပိုလည်းရှည်တာကိုမြင်ရတော့ အဖုတ်ထဲမှ သေးပင်ပေါက်ချင်သလိုလို ကျင်သလိုလို ခံစားမိသွားကာ ကျောများပင်စိမ့်သွားသည်။ ကဲ မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့… ထွန်းကိုမျက်လုံးကို ဖွင့်လိုက်တော့ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာမိုးနေတာက ဒေါ်နီလာရဲ့ဖွံ့ထားပြီး နို့သီးလေးမာထောင်နေသည် ဖြူဝင်းနေသည့်နို့နှစ်လုံး။ သူမအ၀တ်အစားများ ချွတ်ထားပြီး မျက်လုံးများက ရမ္မက်လွမ်းခြုံနေသည်။ ထွန်းကိုကလည်း ဒါမျိုးတော့လက်မနှေးပါ…ဒေါ်နီလာရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို လက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်ပြီး။
ပါးစပ်များဖြင့် တစ်လုံးပြီး တစ်လုံးအပြင်းအထန်စို့လိုက်သည်။ အား…ကျွတ်စ်ကျွတ် ထွန်းကိုရဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းစုပ်ပေးမှုကို ဒေါ်နီလာ သဘောတွေ့သွားသည်…စို့စို့…မောင်လေး..ကြမ်းကြမ်းစို့..ဒါမျိုးမ..မမကကြိုက်တာ။ ဘယ်အချိန်ခထဲက စို့ချင်နေမှန်းမသိဘူး..ကောင်ဆိုးလေး..သူမညုတုတုပြောနေချိန်တွင် အောက်ဖက်မှ သူမသူငယ်ချင်းဒေါ်မြတ်တင်မေကလည်း ထွန်းကိုရဲ့ဒုတ်ကြီးကို သူမလက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းဖြင့်တေ့ပြီး စုပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြွတ်….ထွန်းကိုလီးချောင်းတစ်ခုလုံး ဒေါ်ချိုရဲ့ခံတွင်းပူပူနွေးနွေးအရသာနဲ့ ဒစ်ကိုလျာနဲ့ ကစားပေးပြီး လှည့်ပတ်ယက်ပေးနေတာကြောင့် သူပါမျက်ဖြူလှန်မတတ်ကို လီးချောင်းကကျဉ်ပြီး စိမ့်တက်ကာကောင်းလာပါတယ်။ ဒေါ်မြတ်တင်မေကလည်း ထွန်းကိုရဲ့ လီးကြီးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်နဲ့ သူမပါးတွေကိုချိုင့်သွားအောင်ကို အားရပါးရစုပ်ပေးတာကြောင့်ထွန်းကိုလည်း ခါးကြီးကို ကော့တက်လာပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကလည်းထွန်းကိုနို့စို့ပေးတာကို အပီအပြင်ကို ခံယူနေပါတယ်။ သူမတို့(၃)ဦးရဲ့ လီးစုပ်ပွဲနဲ့ နို့စို့ပွဲကြီးက ထွက်လာတဲ့အသံတွေက တပြွတ်ပြွတ်…တပြတ်ပြတ်နဲ့ အခန်းထဲမှာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးထွက်ပေါ်လာသလို တဟင်းဟင်းနဲ့ ညဉ်းညူသံတွေကလည်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ လိုးပွဲမစတင်မီ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သုံးယောက်သား အပြိုင်အဆိုင်အာရုံနိုးဆွရင်း စိတ်တွေကကြွတက်လာသလို.. ပိုပြီးလည်းစုပ်ချက်တွေကကြမ်းတမ်းလာပါတယ်။ ဒေါ်နီလာရဲ့ နို့သီးထိပ်တွေရဲတွတ်လာပြီး သူမပေါင်ကြားထဲမှာ အရည်ကြည်တွေစီးကျလာသလို ထွန်းကိုတစ်ယောက်လည်း ဒေါ်မြတ်ရဲ့စုပ်ချက်တွေကြောင့် သူ့လီးထိပ်လဲကျင်တက်လာပြီး အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်ကုန်ပါတယ်။ သူံလီးကြီးကလည်း အရမ်းကိုမာတောင်နေပြီးပေါက်ကွဲထွက်မတတ်ပါဘဲ။ အိမ်အပေါ်ထပ်မှအသံလိုလိုကြားသဖြင့်…မိခိုင်တစ်ယောက် အပေါ်ထပ်ကိုတက်ခဲ့သည်။
အိမ်ရှင်မမကြီး ဒေါ်နီလာရဲ့ အခန်းထဲက အသံတွေထွက်နေတာကြောင့် မိခိုင် အခန်းထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အို…သူမနှုတ်မှ အသံလေးပင်ထွက်သွားတာပါဘဲ…။ ဒါပေမဲ့အခန်းထဲက(၃)ယောက်ကသူမကိုမမြင်ကြပါဘူး။ ဒါမျိုးကို အိမ်မှာလူတွေမရှိခိုက် အိမ်ရှင်ဦးလေးကြီးဦးကောင်းမင်းသူ့အခန်းထဲမှာခိုးခိုး ကြည့်ကြည့်တတ်တဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲကအတိုင်းပါဘဲလား..။ အိမ်ကလူများက သူမကိုကလေးလို့ ထင်နေတာ သူမအသက်(၁၆)နှစ်ဆိုတော့ အပျိုပေါက်အရွယ်ရောက်နေပြီလေ။ ယခုမှဘဲထိုမြင်ကွင်းကို သူမအပြင်မှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရသည်။ ဒေါ်မြတ်တင်မေရော ခြံထဲကတိုက်ပုလေးမှာ အိမ်ငှားနေတဲ့ကိုထွန်းကိုရော.. သူမအိမ်ကြီးရှင်မ ဒေါ်နီလာရော ကိုယ်တုံးလုံးကြီးတွေ…။ ဘုရား..ဘုရား..ဦးကောင်းမင်းမရှိတုန်း သူမအိမ်ရှင်မမကြီးက သူ့သူငယ်ချင်းမခေါ်ပြီး နောက်မီးလင်းနေတာပါလား။ မျက်လုံးကိုလွဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့..။ သူမစိတ်တွေကထိုနေရာက မခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာကြောင့်။
ဟနေတဲ့တံခါးကြားကနေပြီး အခန်းထဲကို ခိုးပြီးချောင်းကြည့်နေတာဘဲ။ အင်း…ဟင်း..မောင်ရယ်..မောင်စို့ပေးတာမမနို့တွေပြုတ်ထွက်မတတ်ဘဲ..ဟင်းဟင်း ကောင်းလိုက်တာ..လို့သူမအိမ်ကြီးရှင်မ ဒေါ်နီလာက ကိုထွန်းကိုရဲ့ မျက်နှာပေါ်က သူမနို့ကို ခွာပြီးပြောလိုက်တာကိုကြားရပြီး။ အောက်မှာ ကိုထွန်းကိုရဲ့ပေါင်ကြားမှာ မျက်နှာအပ်နေတဲ့ ဒေါ်မြတ်တင်မေခေါင်းကြွလာတဲ့အခါမှာ.. ကိုထွန်းကိုရဲ့လီးချောင်းကြီးကို မိခိုင်မြင်လိုက်ရတော့ သူမရင်ထဲမှာတုန်သွားပါတယ်.။ လူပျိုယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့သန်မာထွားကြိုင်းတဲ့ လီးကြီးကို သူမပထမဆုံးမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဘဲ အသည်းတွေကျိမ်းသွားပါတယ်။ နည်းတဲ့ လီးကြီးမဟုတ်ပါလား…အဲ့လီးကြီးမျိုးနဲ့သာသူမအဖုတ်လေးထဲကို လိုးထည့်လိုက်လို့ကတော့ အဖုတ်တောင်ကွဲသွားမယ်ထင်တယ်လို့ မိခိုင်တွေးလိုက်မိပါသေးတယ်။ အုို..ငါဘာတွေစဉ်းစားနေပါလိမ့်လို့… ကလေးမလေးမိခိုင်တစ်ယောက် ရှက်တွေးတွေးမိလိုက်ပါတယ်။
သူမမျက်လုံးတွေကလည်း အခန်းထဲကကုတင်ပေါ်ကမခွာနိုင်တော့ဘဲ… အခန်းထဲက သူမအိမ်ကြီးရှင်မဒေါ်နီလာနဲ့ သူမသူငယ်ချင်းဒေါ်မြတ်တင်မေတို့ လင်ငယ်နဲ့ မြူးနေတာကို ဆက်လက်စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေရင်း သူမပေါင်ကြားထဲမှာ အရည်ကြည်လေးတွေ အဖုတ်ထဲက စီးကျလာတာကိုခံစားမိလိုက်ပါတယ်။ မိခိုင်ကား သူမလက်က အလိုလိုသူမထမိန်အောက်သို့လက်နှိုက်ပြီး သူမအဖုတ်လေးကို လက်နှိုက်ပြီး အစိလေးကို လက်ဖြင့်ကစားနေပြီ…။ စိတ်ထဲမှာတော့ ထိုအခန်းထဲသို့ ပြေးဝင်ချင်စိတ်များပင် တရွရွဖြစ်ပေါ်လာသည်..။ တွေ့နေရသော မြင်ကွင်းကား ကိုထွန်းကို၏ မျက်ခွက်ပေါ်တွင် သူမအိမ်ကြီးရှင်မဒေါ်နီလာက နေရာယူထားပြီး အမှုတ်ခံနေသောမြင်ကွင်းနှင့် ကိုထွန်းကို၏လီးတုတ်တုတ်မဲမဲကြီးကို ဒေါ်နီလာသူငယ်ချင်း ဒေါ်မြတ်တင်မေကား အဖုတ်ဖြင့်တေ့ကာ ဖိဖိပြီး ဆောင့်ချနေသောမြင်ကွင်းပင်တည်း။ ဒေါ်နီလာနှင့်ဒေါ်မြတ်တင်မေကားတစ်ယောက်နို့ကို တစ်ယောက်အပြန်အလှန်ဆုပ်နယ်နေကြသေးသည်။
ကိုထွန်းကိုကား ဒေါ်နီလာရဲ့စောက်ပတ်ပြဲပြဲအာအာကြီးကို အောက်မှပင့်ပင့်ပြီးယက်ပေးနေသလုို..ဒေါ်နီလာလည်းကော့တက်နေတာကိုတွေ့ရသည်။ အဟင်းဟင်း..မောင်လေးရယ်…ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ..အအ ဆိုသည့် ဒေါ်နီလာ၏ညဉ်းတွားသံများနှင့်အတူ… ဒေါ်မြတ်တင်မေကလည်း ကိုထွန်းကိုလီးကြီးကို သူမလီးဖြင့် အဆက်မပြတ်ဆောင့်ချနေရင်း..။ ဟင်းဟင်း..အို့အို့..ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ်..မောင့်လီးကြီးက စံချိန်ျမီဘဲ…။ ချွတ်တောင်မချွတ်ချင်တော့ဘူး…။ အင်းဟင်း။ မချွတ်ချင်ရင်လဲစိမ်ထားလိုက်တော့..လို့ မိခိုင်စိတ်ထဲက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါမျိုး နှစ်ယောက်တစ်ယောက်လုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကိုကြည့်နေတဲ့ အပျိုပေါက်လေးမိခိုင်အဖို့တော့…ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကအရသာပါဘဲ။ ကြည့်နေတုန်းမှာဘဲ စောက်ပတ်အယက်ခံနေတဲ့ ဒေါ်နီလာရဲ့အသံတွေက ပိုဆူညံလာပါတယ်။ ပြတ်..ပြတ်..ဆိုတဲ့ကိုထွန်းကိုရဲ့ စောက်ပတ်ယက်သံနဲ့အတူ… မောင်ရေ…အအ…မမပြီးတော့မယ်…။
သွက်သွက်လေးစုပ်ပေးပါ…အ..အ ဆိုတဲ့ ညဉ်းတွားသံနဲ့အတူ ဒေါ်မြတ်တင်မေရဲ့ ကိုထွန်းကိုလီးကို သူမအဖုတ်နဲ့တေ့ပြီး ဆောင့်ချက်တွေကလည်း အရမ်းကိုမြန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒေါ်နီလာဖင်ကြီးကော့တက်သွားပြီး…. သူမအဖုတ်ထဲက စီးကျလာတဲ့ အရည်ဖြူဖြူတွေက ကိုထွန်းကိုမျက်နှာပေါ်ပွသွားသလို အောက်က ကိုထွန်းကိုလီးကိုအဖုတ်နဲ့တေ့ပြီးဆောင့်နေတဲ့ ဒေါ်မြတ်တင်မေကလည်း သူမအဖုတ်နဲ့ဖိပြီး အသာထိုင်လို့အမောဖြေနေပါတယ်.. ပြီးတော့သူမအဖုတ်ထဲကလီးကိုဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်မြတ်တင်မေ အဖုတ်ထဲက အရည်တွေကျလာသလို…ကိုထွန်းကိုလီးထိပ်ကြီးကလဲ အရည်တွေတစ်စက်စက်နဲ့ ပန်းထွက်ကျလာတာကို မိခိုင်မြင်လိုက်ရပါတယ်……။ မိခိုင်ရေ လာဦး…။ ဒေါ်နီလာရဲ့ခေါ်သံကြောင့် မိခိုင်တစ်ယောက် အိမ်ပြူတင်းပေါက်မှာ ကပ်ညှိနေတဲ့ပင့်ကူမျှင်တွေကို ရှင်းလင်းနေရာမှ…. ဟုတ်..လာပါပြီ..အန်တီဆိုပြီး…ဒေါ်နီလာရဲ့အခန်းထဲကိုသွားလိုက်ပါတယ်..။
မနက်ဖြန်ဆို ဦးကောင်းမင်းပြန်ရောက်တော့မှာမို့ အိမ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတာပါ။ အခန်းထဲမှာတော့ ဒေါ်နီလာက မှန်တင်ခုံရှေ့မှာ အလှပြင်နေတာပါ…။ မိခိုင်ရေ…နင့်ကိုခွင့်ပေးမလို့…။ ဒေါ်နီလာက မိခိုင်ကိုတကယ်တော့ပထုတ်နေတာမှန်းမိခိုင်သိပါတယ်။ တစ်ဖက်အိမ်က ကိုထွန်းကိုက ဒီနေ့ကုမ္ပဏီမသွားဘူးလေ…။ မနက်ဖြန်ဦးကောင်းမင်းပြန်လာတော့မှာဆိုတော့ ဒီနေ့ကိုထွန်းကိုနဲ့ တစ်နေကုန်လိုးကြတော့မည်မှန်း မိခိုင်သိလိုက်သည်။ ဟုတ်..ဟုတ်..အန်တီ… သမီးလည်းအိမ်ထဲမှာချည်းနေရတော့ပျင်းနေမှာပေါ့…အဲ့တော့ဆိုပြီး..။ ဒေါ်နီလာက သူမပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ပိုက်ဆံတွေကိုထုတ်နေပါတယ်။ ရော့…သမီး သုံးချင်ရာသုံး….သမီးသူငယ်ချင်းတွေဆီသွားလည်ပေါ့။ ဟုတ်..ဟုတ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အန်တီ။ မိခိုင်လည်း ဒေါ်နီလာပေးသောပိုက်ဆံများကို လှမ်းယူရင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်နီလာကတော့ ပျော်ရွှင်စွာ သူမအခန်းထဲမှ ထွက်သွားသော မိခိုင်ကိုကြည့်ရင်း။
ထွန်းကိုက ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး သူမကိုကောင်းကောင်းလိုးတော့မှာကိုတွေးရင်း… ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေပါတယ်။ ဒီနေ့တင်မေက လူမှုရေးကိစ္စတစ်ခုရှိသဖြင့် လာမည်မဟုတ်။ ဒီတော့ သူမတစ်ယောက်ထဲ ထွန်းကိုအလိုးကိုကောင်းကောင်းခံလို့ရနေသည်။ ထွန်းကိုကား သူမထင်ထားတာထက် အစုပ်လဲကောင်း အမှုတ်လဲကောင်း အလိုးလဲကောင်းနေသဖြင့် သူမထွန်းကိုကိုစွဲနေပြီ။ ဦးကောင်းမင်း ပြန်ရောက်လာပါက ထွန်းကိုနှင့်မည်သည့်နေရာမှာ ချိန်းပြီး အလိုးခံရမလဲဆိုတာ သူမဦးနှောက်ထဲမှာ စဉ်းစားနေသည်။ သူမက ဖုန်းကိုကောက်နှိပ်လိုက်သည်….။ တစ်ဖက်မှ ဖုန်းကိုင်သံကိုကြားရသည်..။ ဟဲလို..မောင်လား…ကောင်မလေးနည်းနည်းနေရင်သွားတော့မယ်…အိမ်ဖက်ကိုကူးလာခဲ့…။ ဟင်းဟင်း..စိတ်သာချ..မမကူးလာခဲ့မယ်..။ မနက်ဖြန် မမလူကြီးပြန်လာတော့မှာဆိုတော့…မမကိုအပီချစ်ပြမယ်…။ ခိခိ…အသည်းတွေကျိန်းလိုက်တာမောင်ရယ်…လူဆိုး…။
စကားပြောနေရင်းတောင် ဒေါ်နီလာအဖုတ်ထဲမှ အရည်ကြည်လေးတွေကစိမ့်ထွက်လာပြီ။ ထွန်းကိုရဲ့ လီးကြီးကို သူမမျက်လုံးထဲမှာ မြင်ယောင်လာပြီလေ။ ရှီးအားလားလား… ဒေါ်နီလာရဲ့ဖင်ကြီးကကော့တက်သွားသည်။ သူမရဲ့ပေါင်တံကြားမှာထွန်းကိုမျက်နှာကရောက်နေပြီး သူမမျက်နှာကထွန်းကိုပေါင်ခွကြားမှာ ပြောင်းပြန်အနေအထားဖြင့် လိုးပွဲမစမီ လီးစုပ်စောက်ပတ်ယက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထွန်းကိုကား ဒေါ်နီလာရဲ့အညှာကိုကိုင်မိသွားပြီဖြစ်သဖြင့်ဒေါ်နီလာကိုလူးနေအောင်ပညာပြတော့သည်။ ဒေါ်နီလာရဲ့စောက်ခေါင်းထဲအထိကိုလျှာကိုချွန်ကာထိုးပြီး ဒေါ်နီလာရဲ့စောက်ပတ် အတွင်းသားနုနုလေးတွေကို ကလော်တော့ဒေါ်နီလာမခံနိုင်တော့။ ထို့ပြင်ဒေါ်နီလာရဲ့စောက်စိလေးကိုချိုချဉ်စုပ်သလိုပင် ပြွတ်ခနဲပြွတ်ခနဲစုပ်စုပ်ပေးလျင် ဒေါ်နီလာတင်ပါးကြီးများတဆတ်ဆတ်တုန်သွားသည်။ ဒေါ်နီလာကလည်းခေသူမဟုတ်ပါ..ထွန်းကိုကိုပညာပြန်ပြသည်။
ထွန်းကိုရဲ့လီးထိပ် ကျင်ငယ်ထွက်ရာအပေါက်လေးကိုလျှာဖျားလေးဖြင့်တော့တော့ကာ ဒစ်ဖျားလေးကိုငုံငုံပြီးစုပ်စုပ်ပေးတော့ထွန်းကိုပင်သုတ်ရေများထွက်ချင်ချင်ဖြစ်သွားသည်။ ပြွတ်…ဒေါ်နီလာက ထွန်းကိုရဲ့လီးကိုစုပ်ပေးနေတာကိုရပ်လိုက်သည့်အချိန်မှာ ထွန်းကိုလည်းစောက်ပတ်ယက်ပေးတာကိုရပ်လိုက်သည်။ ဒေါ်နီလာက ထွန်းကိုမျက်နှာပေါ်ခွထားသော ခြေထောက်များကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး မောင်လေး…မမကို လုပ်ပေးတော့လေ.။ ဟင်းဟင်း…စိတ်သာချ..မမရေ..။ မမအီစိမ့်နေအောင်ကို ဒီကချစ်မောင်လေးက တစ်နေကုန်လုပ်ပေးမှာ။ ဒေါ်နီလာက မွေ့ယာပေါ်တွင် လေးဖက်ထောက်လိုက်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ၀ိုင်းစက်နေသော တင်ပါးကြီးများကြားမှပြူထွက်နေသောသူမအဖုတ်ကြီးက ထွန်းကိုလီးကြီးကိုဖိတ်ခေါ်နေပြီ။ ထွန်းကိုက ဒေါ်နီလာရဲ့ခါးကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး သူ့လီးကြီးကို ဒေါ်နီလာအဖုတ်နဲ့တေ့လိုက်သည်။ သူ့လီးကို ဒေါ်နီလာအဖုတ်ထဲ ဒစ်ဖျားလောက်သာထည့်ပြီး ကစားနေသည်။
ဒေါ်နီလာအဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေရွဲနေပြီ။ အို…အင်း..ဟင်း…မောင်လေးရယ်…မမကိုမနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့… လိုးလိုးပေးပါတော့…အင်းဟင်း..ဒေါ်နီလာကစိတ်တွေကြွတက်လာချေပြီ။ ထွန်းကိုကား ဒေါ်နီလာခါးကိုကိုင်ပြီး…ထပ်ဆွသည်။ အို…မောင်လေး…ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ….အင်းအင်း..။ မမ…အလိုးခံချင်နေပြီပေါ့…။ လိုးလိုးပေးပါ..မောင်လေးရာ…မမခံချင်နေပြီ.။ မမကကျွန်တော်လိုးတာကို တစ်သက်လုံးခံမှာလား…။ လိုးလိုး…မင်းစိတ်ကြိုက်လိုး…သိပလား…။ ဒါဆိုမမဘဲကြီးကိုကွာပြီး..ကျွန်တော့ကိုယူမှာလား..။ မင်းသဘောကောင်လေးရယ်…မမကိုမင်းစိတ်ကြိုက်တာလုပ်…ဟင်းဟင်း။ ဒေါ်နီလာကား ရမ္မက်မီးများတောက်လောင်နေချေပြီ.။ စွပ်ဒုတ်…အင့်..ဒေါ်နီလာရဲ့ခါးကိုကိုင်ပြီးထွန်းကိုကားလီးကိုတစ်ဆုံးသွင်းလိုက်တော့သည်။ ဖောက်ဖောက်…ဘောက်ဘောက်… ထွန်းကိုရဲ့ လီးကိုဆွဲထုတ်ပြီး အဖုတ်ထဲအရှိန်နှင့်ဆောင့်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဒေါ်နီလာရဲ့ဖင်အိအိကြီးတွေ။
တုန်တုန်သွားတာကိုက ထွန်းကိုအဖို့လိုးရတာအရမ်းအရသာရှိလှသည်။ စွပ်စွပ်…ဘွတ်ဘွတ်…အအ..မောင်ရေ..ဆောင့်ဆောင့်…အအ မညှာနဲ့…အင်းအင်း…စွပ်စွပ်..ဘတ်ဘတ်..ရှီးရှီး..စွပ်စွပ်..အအ.. မမကောင်းနေပြီ..သွက်သွက်ဆောင့်ပါမောင့်ရဲ့..အအ.. စွပ်စွပ်..ပြွတ်ပြွတ်…ပလွတ်ပလွတ်… ထွန်းကိုလဲဒေါ်နီလာကသူမစောက်ပတ်နှင့်သူ့လီးကိုညှစ်ညှစ်ပေးနေတာကြောင့် လီးတစ်ခုလုံးကျပ်စီးနေပြီး အရသာတွေ့လှသည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒေါ်နီလာစောက်ပတ်ထဲကိုသူ့ရဲ့လရေတွေကိုပန်းထုတ်လိုက်သည့် အချိန်မှာတေ့ာ့ ဒေါ်နီလာဖင်ကြီးတုန်ခါသွားပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရည်များပြိုင်တူ ထွက်ကျလာလေတော့သည်။ မတွေ့တာကြာတော့သိပ်လွမ်းတာဘဲကိုကြီးရယ်။ ဒေါ်နီလာကား ဦးကောင်းမင်းနားကိုကပ်ချွဲနေသည်။ ဦးကောင်းမင်းကား ဒေါ်နီလာရဲ့ ခါးကိုဖက်ထားသည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီနေ့မယားငယ်အိမ်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲတွေးနေမိသည်။
နီလာရေ…နီလာ… အိမ်ရှေ့မှခေါ်သံကြားရသည်။ အထဲကိုသာဝင်ခဲ့တော့ တင်မေရေ။ သူ့မိန်းမသူငယ်ချင်းတင်မေ….။ ၀တ်ကောင်းစားလှများဝတ်ဆင်ကာရောက်ရှိလာပြီ…။ သြော်..ကိုကောင်းမင်း ဘယ်နေ့ကပြန်ရောက်တာလဲ။ ဒီနေ့ဘဲပြန်ရောက်တယ်…မမြတ်…ဘယ်သွားမလို့လဲ..လှလို့ပလို့ပါလား။ နီလာကိုလာခေါ်တာ ကိုကောင်းမင်းရဲ့ ဒီနေ့ ကျွန်မတို့အိမ်မှာ ပါတီပွဲ ရှိတယ်လေ။ ကျွန်မတို့ အမျိုးသမီးသူငယ်ချင်းတွေချည်းလုပ်မလို့။ အဲ့ဒါနီလာကိုလိုက်မလားလို့ ညအိပ်ခေါ်မလို့။ ကိုကောင်းမင်းလဲပျင်းရင်လိုက်ခဲ့ပါလား။ ဦးကောင်းမင်းစိတ်ထဲမှ ၀မ်းသာသွားသည်…ဂွင်ဘဲ။ လိုက်သွားပါစေသူ့မိန်းမနီလာ။ ဒါမှသူလည်း မယားငယ်အိမ်မှာ သွားနှပ်နေရမည်။ မလိုက်တော့ပါဘူးဗျာ..ခရီးပန်းလာလို့နားလိုက်ဦးမယ်…။ မိန်းမလိုက်သွားမှာမဟုတ်လား…. သွားရမှာပေါ့ကိုကြီးရယ် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလုပ်တဲ့ပွဲဘဲ..သွားမှဖြစ်မယ်။ ရော့လေနီလာ ဦးကောင်းမင်းကားသူ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံ (၅)သိန်းကိုထုတ်ပြီး ဒေါ်နီလာထံပေးလိုက်သည်။ ဖဲရိုက်ဖို့ပေါ့။
အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးကို ချစ်ရတာသိလား။ဒေါ်နီလာကဦးကောင်းမင်းပါးကိုတရွတ်ရွတ်နမ်းပြီး အိမ်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။ မကြာမီမှာတော့ လှလှပပပြင်ဆင်ထားသည့် နီလာကားတင်မေကားနှင့်အတူ ပါတီပွဲသို့ချီတက်သွားတော့သည်။ ဦးကောင်းမင်းကားပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာဖြင့် အခန်းထဲဝင်…အ၀တ်အစားလဲလိုက်သည်။ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုကောက်နှိပ်လိုက်သည်…။ ဟဲလိုသည်းလေးလား…။ ကိုကြီးပါ။ အိမ်ကအဖွားကြီးမရှိတော့ဘူး။ ကိုကြီးလာခဲ့မယ်။စောင့်နေနော်.။သည်းလေးအတွက်လက်ဆောင်တွေဝယ်လာခဲ့မယ်သိလား။ ဦးကောင်းမင်းပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတာကိုကြည့်ပြီးမိခိုင်ရယ်ချင်မိသည်။ ဦးကောင်းမင်းကားသူ့မိန်းမဒေါ်မြတ်တင်မေအိမ်မှာ ပါတီသွားသည်ထင်နေသည်။ တကယ်တော့ ဒေါ်မြတ်တင်မေအိမ်မှာ ဘာပါတီမှမရှိ။ ဒေါ်မြတ်တင်မေယောင်္ကျားကခရီးသွားနေသဖြင့် ဒေါ်နီလာကိုအဖော်ခေါ်သည်။ ဒေါ်နီလာနှင့်ဒေါ်မြတ်တင်မေကား လင်ငယ်ဖြစ်သူထွန်းကိုကို ဒေါ်ချိုအိမ်မှာညအိပ်စေကာ… အပြာကားတွေတစ်ကားပြီးတစ်ကားပြကာ တစ်ညလုံး ထိုအပြာကားထဲကအတိုင်း ထွန်းကိုကို သူမတို့နှစ်ယောက်က စုပ်ခိုင်းမှုတ်ခိုင်း လိုးခိုင်းကြမှာကို ဦးကောင်းမင်းတစ်ယောက် မသိတာကတော့ရီချင်စရာကြီးပင်ဖြစ်နေတော့သည် …..ပြီးပါပြီ။